Zvokudya zvekunze zvakagadzirwa nesimbi isina tsvina zviri pasi pemamiriro akawanda akaoma. Izvi zvinosanganisira mamiriro ekunze, kupisa, makemikari ekuchenesa makemikari uye zvikweshwa, pakati pezvimwe, izvo zvinoita kuti zvinyanye kubatwa nekuora uye makwapa. Kunyange kana zita rezvinyorwa s...
Kuungana ndiyo nzira yakanakisa yekubatana nekutaurirana neshamwari; iyo barbecue pakuungana inogona kuwedzera ushamwari pakati peumwe neumwe. Asi kunetesa kugadzirira barbecue gadziriro inonetesa pasina rubatsiro rwehama neshamwari. Nzira yeku...
Makorokoto kuChuliuxang Catering Equipment Co., Ltd. nekubudirira kwayo kuzere kutora chikamu muCCH2021 10th internetional franchine exbibition Show. Ndichiri kusvika zvibvumirano zvekushandira pamwe kana zvinangwa nevatengi vazhinji, ...
11 Zvinhu Zvokuita paHalloween Kana Usiri Kunyengera-kana-Kubata
Hausi kuronga kuenda pasuo nesuo? Heano mashoma eHalloween-themed zviitiko zvaunogona kuita pamba chaipo (kana padyo), uine vana kana iwe pachako. Zvinonakidza Zvinhu Zvekuita paHalloween Kumba: 1. Shongedza Cookies kana Cupcake Haisi Halloween isina kuwanda kwemasiwiti, handiti? Unganidza vana vako,...
Ko marasha ako akagadzirira kubika riini?
Kungoti marasha akachena, hazvirevi kuti yave nguva yekubika. Kuisa burgers kunotora uye steak pane grill nokukurumidza kana marasha emarasha achangotsvaira kunze kwenyama. Kana izvi zvikaitika, iwe uchada kusiya nyama pane grill kwenguva yakareba kuti uve nechokwadi ...
4 + 1 yekunze gasi grill
Iyo CLUX 4-Burner Gasi Grill ine Side Burner ndiyo yakakwana-yakatenderedza grill kune vanotanga uye yekugocha vanofarira zvakafanana. Iine nzvimbo yakakwana yekubikira yekudyisa mapoka madiki uye epakati nepakati, chinopisa cheparutivi chinopisa, kusveta nekudziya, chivharo chesimbi inorema-basa, uye...
CCH2021 10th internetional franchine exbition
CCH2021 THE 10th international franchise exbibition Iyo China Franchise Exhibition yakatenderwa neBazi reCommerce reChina uye yakavambwa muBeijing muna 1999.
Shenzhou 13 yakavhurwa zvinobudirira uye yakamiswa zvakanaka!
Sekureva kweChina Manned Space Engineering Hofisi, na0:23 musi waGumiguru 16, 2021 nguva yeBeijing, Roketi Yakareba Kurume 2 F Yao 13 inotakura chitundumuseremusere cheShenzhou 13 ichange iine chokwadi panguva yakarongwa paJiuquan Satellite Launch Center. Mushure mekudzikisira nekutanga, nezve ...
Chii Chaunogona Kubika muGasi Pizza Oven Kunze kwePizza?
Uri kushamisika kana zvakakosha here kuisa mari muhovhoni yepizza kana zvese zvaunogona kubika iri pizza-shure kwezvose, zvirokwazvo kunyange vadikani vakuru vepizza pakati pedu vaisagona kuidya mazuva ese! Wanga uchiziva here kuti uku ndiko kutanga kwezvaunogona kubika muovheni yegasi pizza? Kune akawanda akasiyana optio ...
Musiyano uripo pakati peChinese barbecue uye yekune dzimwe nyika barbecue
Pamusoro pekuve yakakurumbira munyika yedu, barbecue zvakare yakakurumbira kunze kwenyika, asi isu tese tinoziva kuti tsika yebarbecue yakatosiyana nenyika nenyika, saka ngatitarisei China. Ndeupi musiyano uripo pakati pebarbecue nebarbe yekunze ...
Nezve kurongedza kwegrill
Kunyange zvazvo magrills achiita sezvinhu zvakasimba kuti atakurwe, anoramba achifanira kuiswa zvakanaka kuti ave nechokwadi chokuti haana kukuvadzwa nezvinwiwa kana kubata zvisina kunaka. Rega ndikutsanangurire iwo akasiyana mapakeji e akati wandei barbecue grills ayo kambani yedu clux ichangobva ...
Vadikani mose shamwari dzangu, musi wa 1 Oct tichange tine 3 days off. Kupemberera Zuva reNyika reChina. Chii chinonzi Zuva reNyika reChina uye rinocherechedzwa sei? Zuva reNyika reChina, rinonzi 国庆节 (Guóqìng jié) muchiChinese, rinopembererwa nemufaro mukuru gore rega rega musi wa1 Gumiguru sezororo reveruzhinji. ...